Tsvaga zvakanakira kushandisa bvudzi serum | Bezzia
Susana Garcia | 03/04/2021 20:00 | Runako, Zvigadzirwa zverunako
Izvo hazvina basa kana bvudzi rako rakareba, rakapfupika, rakamonana, rakatwasuka, shava, shava kana blonde, nekuti zvinowanzo kuve nebasa pakupedzisira ndezvekuti une hutano uye wakachengeta bvudzi, chimwe chinhu chisingawanikwe nyore. Tichakupai imwe mangani mazano ekudzidza mashandisiro ebvudzi serum. Sezvo isu tichichengeta kumeso kwedu, zvakafanira kuti utarisewo hutano hwebvudzi. Izvo zvakakosha kuti ushandise zvigadzirwa zvinodikanwa izvi.
Tichataura nezvazvo nei uchifanira kushandisa bvudzi serum uye zvakanakira kuzviita. Iyo seramu chigadzirwa chatinowanawo kumeso uye icho chakamisikidza zvinoshanda zvinoshandiswa kunyatsotarisira bvudzi, richiita pazvinenge zvichidikanwa, sezvo paine mhando dzakawanda dzeserum.
1 Chii icho
2 Maitiro ekushandisa iyo serum
3 Seramu yebvudzi rega rega
El Bvudzi serum chigadzirwa chinoshanda kutora zvakanyanya kutarisira bvudzi izvo zvakakanganisika zvakanyanya kana izvo zvinoda kutarisirwa zvakanyanya, kupfuura izvo zvatinopa zuva nezuva. Muzvinhu izvi munowanzo kuve nekukwirisa kwezvinhu zvinoshandiswa kubatsira kugadzirisa kukuvara kwemwedzi muvhudzi, nekudaro zvinowanzove zvinodhura zvinodhura. Kunyangwe ichokwadi zvakare kuti seramu dzinongoshandiswa nguva nenguva, kuita mushonga wekuchengetedza bvudzi. Iwe unogona kuwana serum inoenderana nezvinodiwa zvakasiyana, asi chokwadi ndechekuti mhando idzi dzezvigadzirwa zvakajairika dzinowanzo tarisa pakupa bvudzi kupenya, kuvhara zvimedu, kuidiridzira uye kutarisira ganda remusoro.
Maitiro ekushandisa iyo serum
El bvudzi serum rinowanzoiswa muhuwandu hushomaSezvo chiri chigadzirwa chakakomberedzwa, hatifanire kushandisa zvakawandisa. Izvo zvinoenda kumeso seramu. Nemadonhwe mashoma anokwizwa mumvere dzakaoma kana dzakanyorova, zvinoenderana nechaunoda. Inoiswa pamacheto uye inoenda kumusoro. Kazhinji inogona zvakare kuiswa kune yeganda nemidzi. Chero zvazvingaitika, tinofanirwa kugara tichiverenga mirairo yemugadziri kuti tizive mashandisiro ayo uye nemugove wayo.
Seramu yebvudzi rega rega
Nhasi tinowana mikana yakawanda maererano nezvizoro. Imwe yacho ndeyekuti isu tinogona kuona akawanda marudzi e zvigadzirwa zvebvudzi panhau yeserum. Imwe yezvakatengwa zvakanyanya nguva pfupi yadarika ndiyo inotarisa pakuchengeta bvudzi nekuisa kupisa, zvakare kudzivirira frizz. Mhando idzi dzeseramu dzinowanzoiswa pamwe nekugezwa kwebvudzi rega kuitira kuti vhudzi risakanganiswe nekushandisa maturu ekupisa senge simbi kana yekuomesa yekurova. Mhedzisiro yacho ndeyevhudzi rakachengetedzwa rine rakavharwa cuticle, inopenya uye isina kupatsanurwa mativi. Iyo seramu inodzivirira uye inodzivirira kukuvara kwebvudzi.
El bvudzi rakamonana ndeimwe mhando yebvudzi yaunofanira kutsvaga serum inokodzera hunhu hwayo. Kune zvimwe zvinogona kubatsira kuchengetedza iyo curl uye hydrate. Iri vhudzi rinowanzo svava uye kurasikirwa nekupenya, mukuwedzera pakubata zviri nyore, saka iyo serum inogona kuve yakanaka yekuwedzera kuti iwedzere iyo yekuwedzera hydration nguva nenguva iyo inochengeta iyo curls yakatsanangurwa uye ine hydrated. Frizz ndomumwe wevavengi vakuru verudzi urwu rwebvudzi.
El serum kune hydrate ndeimwe yeinonyanya kutsvakwa. Kazhinji, kana isu tichitsvaga yemhando serum, ndeyekudzikisa zvakanyanya mhando dzese dzebvudzi. Iko kune serum iyo inogona kutowanikwa pamutengo unodhura kwazvo uye iyo inotibatsira kuti tiwedzere kuwedzeredza hydration kubvudzi. Dambudziko remagumo akaomeswa chinhu chinowanzoitika uye maseramu anogona kubatsira kupedza izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Nei uchifanira kushandisa serum rebvudzi
Zvakanakira kurovedza muviri kweosteoarthritis